Ebe kacha elu US iji chekwaa ego site na ịnọ na họtel n'elu Airbnb
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ebe kacha elu US iji chekwaa ego site na ịnọ na họtel n'elu Airbnb
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ebe kacha elu US iji chekwaa ego site na ịnọ na họtel n'elu Airbnb.
Saịtị mgbazinye ezumike na-enye ọnụnọ pụrụ iche nwere akụkọ ịkọ, ma hapụ ndị ọbịa ka ha nwetakwu ego mgbe ha na-anọghị n'obodo, mana ọ ka dị ọnụ ala?
Ọnụ ego abalị nke ọnụ ụlọ nkwari akụ abụọ dị nso na Waikiki Beach bụ naanị $74, ebe maka ọnụnọ Airbnb yiri ya, ọ ga-efu gị $271.
Ịnọ n'abalị na nso Grand Teton National Park ga-eri naanị $231 n'ụlọ nkwari akụ mana nnukwu $847 na Airbnb.
Onye ọ bụla chọrọ ezumike n'otu oge, na ezumike bụ ụzọ ọkụ siri ike iji zuru ike ma mee ncheta ọhụrụ. Otú ọ dị, ụgwọ ezumike nwere ike ịgbakwunye tupu ị ghọta na ọtụtụ n'ime anyị ga-ahọrọ splurge na-agbanwe ndụ ihe omume, ihe ncheta, na osisi nri, kama ịfụ mmefu ego n'ime ụlọ.
O siri ike ịmata ụdị ebe obibi kacha mma maka mmefu ego gị. Ebe Airbnb dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo niile, site na London ruo Hong Kong, ọ dị mfe ịgbazite ụlọ karịa mgbe ọ bụla.
Ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ nyochara ọnụ ahịa ndepụta Airbnb na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na 80 njem njem kachasị elu, na US na gburugburu ụwa, iji kpughee nke bụ ụzọ enyi na mmefu ego ka ị nọrọ.
1. Osimiri Waikiki, Hawai
Pasent echekwa: 72.86%
Paradaịs Hawaii a mara mma dị n'ime mpaghara Honolulu na Oahu Island. A ma ama maka osimiri ya na-acha ọcha na oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ dị jụụ. Waikiki na-adọta ọtụtụ puku ndị njem nlegharị anya kwa afọ ma bụrụkwa ebe ezumike nke agwaetiti ahụ.
Ọ bụ ezie na mpaghara ahụ nwere ihe karịrị 300 Airbnb ọnọdụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ntụrụndụ na-achịkwa ụsọ oké osimiri. Ọnụ ahịa ha dịgasị iche iche na ịnweta okomoko dị ka ọdọ mmiri na spa nwere ike ịpụta na ị ga-akwụ ụgwọ karịa.
Ma nkezi ọnụahịa abalị nke ọnụ ụlọ nkwari akụ abụọ dị nso Osimiri Waikiki bụ naanị $74, ebe maka ọnụnọ Airbnb yiri ya, ọ ga-efu gị $271! Maka akara 72.9%, ndị na-aga ezumike ga-aka mma ịhọrọ nhọrọ ọdịnala.
2. Ogige Ugwu Ukwu Teton, Wyoming
Pasent echekwa: 72.79%
Mgbe ị na-eche maka ogige ntụrụndụ mba United States, Yellowstone, Yosemite ma ọ bụ Zaịọn nwere ike iburu n'uche. Otú ọ dị, dokwara captivating odida obodo nke Grand Teton National Park na-adọta ọtụtụ ndị njem na-achọ njem nlegharị anya.